शत्रुलाई सत्ता मा पुर्याउने बाटो क्रांति को बाटो होइन
मधेसको प्रमुख शत्रु एमाले। त्यस एमाले लाई सत्ता मा पुर्याउने गरी यस क्रांति को अवतरण हुनै सक्दैन। शत्रुलाई सत्ता मा पुर्याउने बाटो क्रांति को बाटो होइन। त्यो विजय गद्दार को बाटो हो, क्रांति को होइन। क्रांति ले शत्रु लाई क्षत विक्षत पार्छ। क्रांति ले शत्रु लाई समाप्त गर्छ। यसै देशमा त्यस्तो भएको छ। निर्दल स्वाहा भएको इतिहास छ, राजा स्वाहा भएको इतिहास छ। तीन बाहुन दल स्वाहा नभइ संघीयता कसरी स्थापित हुन्छ?
क्रांति गरेको छ मधेसी मोर्चा ले सरकार ले विजय गच्छेदार सँग "वार्ता" को के नाटक गरेको? विजय यस क्रांति को पहिला कारक र अहिले दर्शक हो। घुँडा टेक। वार्ता त्यही हो।
Constituent assembly constitution cpn uml federalism Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Terai